Ben’ny Tanàna, Andriantsitohaina Naina: «Hametraka Antananarivo madio sy milamina isika» | NewsMada
Hampahafantarina ny rehetra, anio, etsy amin’ny lapan’ny Tanàna Analakely ny “Lalàna amam-pitsipika mifehy ny fahadiovana – CMH). Iarahan’ny CUA miasa amin’ny Friedrich-Ebert-Stiftung(FES) izany amin’ny alalana fifanaovan-tsonia fiaraha-miombona antoka eo amin’ny roa tonta. “Tonga ny fotoana hametrahana an’Antananarivo sy hamerenana ny hasina ka ho tanàna madio, mazava, milamina ary maoderina”, hoy ny fanambaran’ny ben’ny Tanàna, Andriantsitohaina Naina.
Tsy fotoan’ny gaboraraka sy tsy fanajana lalàna…
Nohitsiny fa niainan’ny mponina Antananarivo nandritra ny fotoana maro ny korontana, ny kolikoly, ny fitohanan’ny fifamoivoizana, ny gaboraraka, ny fanorenana tsy ara-dalàna, ny tsy fandriampahalemana sy ny tsy fanajana lalàna… “Tanànantsika ity sady Renivohitr’i Madagasikara ka tsy azo ekena intsony izany”, hoy ihany izy.
Araka izany, hisy ny fampitaovana samihafa sy fanofanana ary fanentanana, hotanterahina anio, mifandraika amin’izany fahadiovana amin’ny lafiny rehetra izany.
Fanambin’ny CUA ny fahadiovana
Ho fantatra eo koa ireo lalàna sy fitsipika mifehy izany fahadiovana izany. Ny fizarana ny andraikitry ny tsirairay satria fanamby ho an’ny CUA ny fahadiovana. Tsy maintsy jerena sy apetraka miaraka amin’izany ny rafitra hampiharana ny CMH.